NUGEN Waxay Soo Bandhigtay Qalab Dhejis La'aanta Oo Loogu Talo Galay Mashaariicda Music Iyo Telefishanka | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » NUGEN Waxay Soo Bandhigeysaa Barnaamijyo La Siiyey Oo La Sii Daayay Oo Ku Saabsan Barnaamijyada Fanka Iyo Telefishanka
NUGEN Waxay Soo Bandhigeysaa Barnaamijyo La Siiyey Oo La Sii Daayay Oo Ku Saabsan Barnaamijyada Fanka Iyo Telefishanka
Los Angeles, NOVEMBER 7, 2019 - Maaddaama ay tahay astaanta sare ee soodejinta codka maqalka ee telefishanka iyo kuwa iskudarsan muusikada iyo soosaarayaasha adduunka oo dhan, NUGEN Audio waxay kasbatay dareen guud ahaan warshadaha oo dhan. Markii uu Injineer Isku-dhafka ah Jorel Corpus uu helay nuqul ka mid ah xirmo shirkadda soo saare ka aheyd dhacdo ku saabsan GRAMMY-da, wuxuu durbadiiba ogaaday inay tahay dhammaystirka ugu habboon ee qulqulka shaqadiisa hadda jira ee heerarkiisa muusikada iyo telefishanka.
Corpus wuxuu sharraxay in kahor helitaanka softiweerka, uu maqlay waxyaalo waa weyn oo ku saabsan NUGEN iyo, ka dib markii uu adeegsaday fiilooyinka, wuxuu si dhakhso ah u ogaaday baaxadda faa'iidooyinka xalka. "Saaxiibo badan oo saaxiibo ah iyo asxaabteyda aan aaminsanahay ayaa adeegsada NUGEN," ayuu yidhi. Waxaan doonayey inaan isticmaalo xalalka shirkadda in muddo ah, sidaa darteed markii aan helay xirmada soo-saareyaasha, waxay ahayd waqti habboon. Isla markii aan bilaabay inaan isticmaalo NUGEN, waxaan dareemay kalsooni dheeraad ah. Waxaan u isticmaalaa maqal-muuqaal Visualizer markii macaamiisha ay ii soo diraan feylal si dhaqso ah aan u falanqeeyo haddii seenyaalaha uu ku yaallo mono-ama stereo. Tani waxay habeysaa kheyraadkayga waxayna si toos ah u shaqeysaa qulqulka shaqadeyda. Waxaan sidoo kale u istcimaa aaladaha istcimaalo iyo Stereoplacer si joogto ah. ”
Ka sokow fiilooyinlada laga helay xirmada soo-saareha, Corpus wuxuu tan iyo markii uu helay Qalabka NUGEN ee Qalabka codka ee mitirka codka ee VisLM, taas oo ka caawineysa inuu adeecdo marka uu ka shaqeynayo barnaamijyo badan oo telefishan iyo fiidiyow ah. “Waxaan ogaadey in xaddiga isteerinka ee ISL uu sifiican ula shaqeeyo mitirka maqalka ee VisLM,” ayuu raaciyay. “ISL waxay bixisaa si hufan oo hufan oo dhab ah oo xaddidaysa dhammaan waxyaabaha ku habboon ee hal-abuurka leh iyo waxyaabaha ku jira. Waagii hore, oo ay la socdaan alaabooyinka tartamaya, waxaan ka walwalayaa in la i hoggaansamo. NUGEN, xitaa ka fikirin maysid. Isticmaalka qalabka wax lagu xiro ee NUGEN wuxuu ii oggolaanayaa inaan sameeyo Netflix, Amazon Prime ama telefishanno gaarsiiya shuruudo adag cod ahaan si aad u fudud.
Tan iyo markii lagu soo daray barnaamijyada 'NUGEN' shaqadiisa, Corpus wuxuu helay naftiisa isaga oo badalaya aaladaha uu horay u isticmaali jiray. - Inkasta oo aad leedahay aalado la mid ah oo isla shaqada qabanaya, haddana waad ku qanacsan tahay adeegsiga xalka tayada sare leh, ayuu yidhi. Waxaan u arkaa in barnaamijka NUGEN uu yahay lakabka ugu dambeeya waxsoosaarkayga. Markaan rabo inaan hubiyo waxa aan qabanayo inuu yahay mid is waafaqsan, waxaan isticmaali doonaa NUGEN. ”
Ka sokow alaabada ay soo saartay, Corpus wuxuu sidoo kale aad ugu faraxsan yahay adeegga iyo taageerada uu ka helo kooxda NUGEN Audio. “NUGEN wuxuu leeyahay sumcad weyn, is dhexgalka aan la yeesho markasta oo aan u baahdo inaan la gaaro waa cajiib,” ayuu sii raaciyay. “Waa wax aad ii farxad gelin ah inaan ogaano in NUGEN runtii ay caawiso dadka, sida aniga oo kale ah, ee ka shaqeeya warshadan waalan. Wax soo saarkooda ayaa ka dhigaya habka shaqadeena u fududaanaya oo na siiya wax yar oo aan ka fikirno oo aan ka walwaleyno. Waa wax layaableh inaan ogaano inaan geeskeena nahay saaxiib wanaagsan. ”
Corpus waa aasaaska Grammy-Emmy-haysta, Billboard #1 abaalmarin soo saare muusig, injineer cod ah iyo farshaxan muusig oo caan ku ah shaqadiisa gudaha Mareykanka iyo Aasiya, oo soo saarta Brandy, Tyrese, Boyz II Men, JJ Lin, GEM iyo riwaayadaha Disney. Dhinaca soosaarka telefishanka, buundooyinkiisa waxaa ka mid ah The Maalinta Barafka on Amazon Prime iyo Qaabka Qoyska, Bandhig faneedka Aasiya lagu sii daayay ee hoos yimaada Justin Lin's YOMYOMF iyo Warner Bros. Marxaladda 13 Platfrom,; iyo sidoo kale mashaariic fara badan oo loogu talagalay filimada Windy, oo ah hay'ad wax soo saar hal abuur leh oo dhowaan ku guuleysatay abaalmarinta AdWeek ARC Award. Waxa kale oo uu la shaqeeyaa Indie Pop Films, oo ah adeeg buuxa oo toos ah iyo wax soo saarkii mooshinka laga joojiyo ee shaqadiisu ku guuleysatay abaalmarino, lagana xushay xafladaha filimka caalamiga ah.
Macluumaadka ku saabsan xirmada barnaamijka soo-saaraha ee NUGEN, oo ay weheliso qoyska NUGEN Audio ee dhammeystiran ee wax soo saarka, ayaa laga heli karaa at www.nugenaudio.com. Wixii su'aalo kale oo dhan, fadlan iimayl [Email ilaaliyo].
NUGEN Audio waa soo saaraha qalabka maqalka ee casriga ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah oo bixiya farsamooyinka ugu sareeya ee warshadeynta iyo soo-saarka dib-u-kobcinta ee wareegsan kor u qaadista iyo dhamaadka-dhamaadka maaraynta dhawaaqa, cabbirida, iyo sixitaanka ka soo iibsashada maadada illaa ciyaarta. Iyadoo la tixraayo waayo-aragnimada wax-soo-saarka dhabta ah ee NUGENn Design Audio, alaabooyinka shirkadu waxay fududeeyeen inay keenaan codad tayo sare leh, wakhtigeeda oo lagu badbaadinayo, dhimista kharashaadka, iyo ilaalinta hannaanka hal-abuurka. Qalabka NUGEN Audio ee qalabka falanqaynta maqalka, qiyaasidda dhawaaqa, isku dhafka / hagidda, iyo raadraaca waxaa isticmaala magacyada ugu sareeya aduunka ee ku baahsan warbaahinta, soo-saarka dambe, iyo wax soo saarka muusikada. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.nugenaudio.com.
All alaabooyinka muuqday, taasina waa hantida mulkiilayaasha ay ka soo jeedaan.
Raac NUGEN Audio:
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Audio Qalabka Fudud Broadcast Engineer Broadcast Engineering Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor NUGEN Audio Ka baxsan baabuur Broadcast wax soo saarka post SJGolden - Spears & Fiilooyinka Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago TV Technology TVU Networks Video Engineer	2019-11-08
Previous: PMC waxay u magacaawday Istuudiyaha Vintage Studios sidii ay u Qaybiyeen Taayiriyaasheeda Thai Dhamaanba Ilaaliyayaasha Audio Audio
Next: Khabiirka Naqshadeynta Sawirka - Gugii Bixsan, 2020 Internship